Fanabeazam-pirenena hozaraina ho an’ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana nihinana ilay tambavy COVID 19 dia nivoaka tamin’ny fahanginana omaly ny zanaky ny Faritra Sofia nahitana ny fikambanana Sofia Miray. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy ekeny no sady tsy hankasitrahany ny fanalambaraka ny andrim-panjakana mpanatanteraka tamin’ny alalan’ny fanosoram-potaka an-dRtoa ministra Andriamanana Rijasoa Josoa. Tohanan’izy ireo tsy misy fepetra araka izany ny fihetsika mitory fahasahiana mampanjaka ny rariny sy ny hitsiny entin’ny zanak’izy ireo manatanteraka ny adidy napetraka taminy. Nambaran’izy ireo fa vao fotoana fohy no nanendrena ity ministra ity nefa efa marobe sahady ny asa vitany toy ny fitetezam-paritra manentana ny mpiray tanindrazana ao anatin’izao ady hatao amin’ny COVID 19 izao. Toraka izany koa hoy izy ireo ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana sy ny fizarana rakibolana. Mikasika ny fangatahana fanadihadiana lalina momba ny raharaha moa dia nomarihin’izy ireo fa anjaran’ny tompon’andraikitra hafa ny manao izany izay tsy fantatra na hankasitrahany na tsia.